Bosnia oo racfaan ka qaadatay xukun ah in aan Serbia xasuuq gaysan - BBC News Somali
Bosnia oo racfaan ka qaadatay xukun ah in aan Serbia xasuuq gaysan
Nabarada xasuuqii ka dhacay Bosnia weli way damqanayaan
Hogaamiyaha Muslimiinta Bosnia ayaa sheegay in Bosnia si rasmi ah uga codsatay maxkamadda ugu sarraysa ee Qaramada Midoobay in ay dib u eegto xukunka ay ridday ee ah in aan Serbia wax eeda ku lahayn xasuuqii dhacay sagaashamaadkii.
Bakir Izetbegovic, oo ah xubin ka tirsan golaha madaxtooyada saddex geesoodka ah ee Bosnia, ayaa sheegay inuu dalbanayo "run iyo cadaalad".
Saraakiisha isirkoodu yahay Serbian-ka ayaa se iyaguna ka digay in talaabadani dalka u horseedi karto "xiisad ba'an".
Sannadkii 2007-dii ayaa Maxkmadda Caalamiga ah ee Caddaaladu waxay ku wayday dalka Serbia inuu masuuliyad toos ah ku lahaa xasuuqii dhacay.
Wuxu ahaa xasuuqii ugu xumaa ee ka dhacay Yurub dagaalkii labaad ee dunida ka dib. Waxase Maxakamadda Caalamiga ah ee Caddaaladu xukuntatay in Serbia ay ku xad gudubtay sharciga caalamiga ah maadaama oo ay ka baaqsatay in ay ka hortagto dilkii dhacay, hase yeeshee waxay meesha ka saartay in ay si toos ah masuul uga ahayd wixii dhacay.
Khamiistii ayaa Mr Izetbegovic wuxu warfidiyeenka u sheegay in "cosdi dib u eegid ah loo gudbinayo maxkamadda". Racfaanka waxa la gudbiyay ka hor intii aanay dhamaan mudadii loo qabtay ee ahayd toban sanadoo gudahood oo ku eg 26 bishan February.
Mladen Ivanic, oo ah xubinta qawmiyada Serb-ka ugu jira golaha madaxtooyada ayaa isna sheegay in ay wacnayd in go'aanka si wada jira uu u qaato golaha madaxtooyada saddex geesoodka ahi.
"Waxaan ka cabsi qabaa in arrintani nagu bilawdo xiisad ba'an" ayuu yidhi Mr Ivanic.
Hase yeeshee, ra'isal wasaaraha Serbia, Aleksandar Vucic, ayaa hore ugu tilmaamay go'aanka Izetbegovic mid "u xun" xidhiidhka labada dal.
Afar qodob oo lagu xusuusan doono Maxamed Cabdullaahi Farmaajo